ဧပြီလ မီတာခ များနေတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ တဲ့ အခြေအနေများ နှင့် ဖြေရှင်းချက် များ (အဲဒါကြောင့် မီတာများ ဖြစ်နေတာများလား) – Let Pan Daily
ဧပြီလ မီတာခကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်ပီး ​ပြောစရာ​လေးရှိပါတယ်… ယူနစ် ၁၅၀ free unit နှုတ်ပီး တာတောင် အိမ်သုံးမီတာ​တွေက အရင်လ​တွေ ထက် ၂ ဆ​ကျော်​လောက်ကျသင့်​နေကြပါတယ်…
ကျ​နော့် သိသ​လောက် အချက် ၃ ချက်ပဲရှိပါတယ်….
၁… Stay At Home ​နေ တာများတယ့်အတွက် အိမ်​တွေ အားလုံးလိုလိုဟာ လျှပ်စစ်နဲ့ပါတ်သတ်တယ့်အရာ​တွေကို ပိုသုံးဖြစ်ပါတယ်.. ဥပမာ …​အဲယားကွန်း ပန်ကာ မီးပူ လျှပ်စစ်မီးဖို ထမင်း​ပေါင်းအိုး တီဗီ အားသွင်း​စေရတယ့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ …..
၂… ယခုလမီတာခ​ငွေမှာ ဧပြီလအတွက်ဖြစ်ပါတယ်…​နွေရာသီ အလွန်ပူ တယ့်ရာသီဖြစ်ပီး စံချိန်တင် အပူချိန်​တွေဖြစ်​ပေါ်​နေပါတယ်..ဒီအချက်က Stay At Home မှာ လျှပ်စစ်ပိုသုံးဖို့ Boost ​ပေးသလိုဖြစ်​နေပါတယ်…
၃.. မီတာဖတ် စာ​ရေးများ၏ ပျက်ကွက်မှု့​ကြောင့်ဖြစ်နိုင် ပါတယ်…
မီတာဖတ် စာ​ရေးများသည် တစ်ဦးလျှင်အိမ်​ခြေ ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ ခန့်ကို လစဉ် ၁ရက်​နေ့မှ ၅ ရက်​နေ့အတွင်း ဖတ်ရှု့ရပါတယ်…အဆိုပါဝန်ထမ်းများမှာ ပုံမှန်အသုံးများသာရှိ​သော ​နေအိမ်များ၏ မီတာယူနစ်အား လစဉ် အပြည့်အဝ မဖတ်ပဲ ရမ်းဖြည့်မှန်းဖြည့်ကြတာ အစဉ်အလာ လိုဖြစ်​နေပါပီ… ထိန်းချုပ်ရအလွန်ခက်​သော အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်…နည်းပညာကို သုံးရန် အရင်းအနှီး​တော်​တော်ကြီးပါတယ်…
ထို့​ကြောင့် ​ရှေး ယခင်လ​တွေက မှန်းဖြည့်ရမ်းဖြည့် ခဲ့ပီးမှ ယခုလ​တွေအတွင်း ​သေချာဖတ်ကြ​တော့ ယူနစ် အသုံး​တွေက အများကြီးဖြစ်​နေရခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …
၄…အဆိုပါယူနစ် အသုံးများမှာ မသမာမှု့များ မဖြစ်နိုင်ပါ​ကြောင်း နှင့် ​နွေရာသီအပူ အိမ်​နေချိန်များ ​ပေါင်းစပ်ပီး ဖြစ်​ပေါ်လာ​သော ကိစ္စရပ်
ဟုထင်မြင်ယူဆရပါသည် …အသုံး ယူနစ်တိုးသွား​အောင် မည်သည့်နည်းပညာနဲ့မှ လုပ်မရတာ​သေချာပါတယ်…မီတာဖတ်စာ​ရေး​တွေ ပုံမှန်ဖတ်ခြင်း မဖတ်ခြင်း နှင့် ရာသီဥတုရယ် ကိုဗစ်​ကြောင့် အိမ်​နေချိန်များခြင်းများ​ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည် …
၅…မိမိတို့​နေအိမ်များအတွက်သံသယ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက မီတာစာရွက်တွင်ရှိ​သော အသုံးယူနစ်အား မိမိတို့၏ မီတာ​ဘောက်တွင် ဖတ်ရှု့ကြည့်ခြင်းဖြင့် စစ်​ဆေးကြ​စေလိုပါတယ်…ကျွန်​တော်တို့ဘက်မှလည်း ကူညီရန်အသင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ …
ဧပွီလ မီတာခကိစ်စနဲ့ ပါတျသတျပီး ပွောစရာလေးရှိပါတယျ… ယူနဈ ၁၅၀ free unit နှုတျပီး တာတောငျ အိမျသုံးမီတာတှကေ အရငျလတှေ ထကျ ၂ ဆကြျောလောကျကသြငျ့နကွေပါတယျ…
ကနြေျာ့ သိသလောကျ အခကျြ ၃ ခကျြပဲရှိပါတယျ….
၁… Stay At Home နေ တာမြားတယျ့အတှကျ အိမျတှေ အားလုံးလိုလိုဟာ လြှပျစဈနဲ့ပါတျသတျတယျ့အရာတှကေို ပိုသုံးဖွဈပါတယျ.. ဥပမာ …အဲယားကှနျး ပနျကာ မီးပူ လြှပျစဈမီးဖို ထမငျးပေါငျးအိုး တီဗီ အားသှငျးစရေတယျ့လြှပျစဈပစ်စညျးမြား …..
၂… ယခုလမီတာခငှမှော ဧပွီလအတှကျဖွဈပါတယျ…နှရောသီ အလှနျပူ တယျ့ရာသီဖွဈပီး စံခြိနျတငျ အပူခြိနျတှဖွေဈပျေါနပေါတယျ..ဒီအခကျြက Stay At Home မှာ လြှပျစဈပိုသုံးဖို့ Boost ပေးသလိုဖွဈနပေါတယျ…
၃.. မီတာဖတျ စာရေးမြား၏ ပကျြကှကျမှု့ကွောငျ့ဖွဈနိုငျ ပါတယျ…
မီတာဖတျ စာရေးမြားသညျ တဈဦးလြှငျအိမျခွေ ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ ခနျ့ကို လစဉျ ၁ရကျနမှေ့ ၅ ရကျနအေ့တှငျး ဖတျရှု့ရပါတယျ…အဆိုပါဝနျထမျးမြားမှာ ပုံမှနျအသုံးမြားသာရှိသော နအေိမျမြား၏ မီတာယူနဈအား လစဉျ အပွညျ့အဝ မဖတျပဲ ရမျးဖွညျ့မှနျးဖွညျ့ကွတာ အစဉျအလာ လိုဖွဈနပေါပီ… ထိနျးခြုပျရအလှနျခကျသော အလုပျဖွဈပါတယျ…နညျးပညာကို သုံးရနျ အရငျးအနှီးတျောတျောကွီးပါတယျ…
ထို့ကွောငျ့ ရှေး ယခငျလတှကေ မှနျးဖွညျ့ရမျးဖွညျ့ ခဲ့ပီးမှ ယခုလတှအေတှငျး သခြောဖတျကွတော့ ယူနဈ အသုံးတှကေ အမြားကွီးဖွဈနရေခွငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ …
၄…အဆိုပါယူနဈ အသုံးမြားမှာ မသမာမှု့မြား မဖွဈနိုငျပါကွောငျး နှငျ့ နှရောသီအပူ အိမျနခြေိနျမြား ပေါငျးစပျပီး ဖွဈပျေါလာသော ကိစ်စရပျ
ဟုထငျမွငျယူဆရပါသညျ …အသုံး ယူနဈတိုးသှားအောငျ မညျသညျ့နညျးပညာနဲ့မှ လုပျမရတာသခြောပါတယျ…မီတာဖတျစာရေးတှေ ပုံမှနျဖတျခွငျး မဖတျခွငျး နှငျ့ ရာသီဥတုရယျ ကိုဗဈကွောငျ့ အိမျနခြေိနျမြားခွငျးမြားကွောငျ့သာ ဖွဈပါလိမျ့မညျ …
၅…မိမိတို့နအေိမျမြားအတှကျသံသယ တဈစုံတဈရာရှိပါက မီတာစာရှကျတှငျရှိသော အသုံးယူနဈအား မိမိတို့၏ မီတာဘောကျတှငျ ဖတျရှု့ကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ စဈဆေးကွစလေိုပါတယျ…ကြှနျတျောတို့ဘကျမှလညျး ကူညီရနျအသငျ့ရှိပါတယျခငျဗြာ …
“ဘုရား နဲ့ သံဃာတော်တွေ ကို သောက်တော်ရေ ကပ်လှူချင်ပါတယ်” ဆိုပြီး ဘုန်းဘုန်း ညွှန်ပြတဲ့ နေရာကို တူးလိုက်တဲ့အခါ (ရုပ်/သံ)
ရနျကုနျမွို့နယျ အသီးသီး ရဲ့ မွို့နယျဆရာဝနျ ဖုနျး နံပါတျ မြား အရေးကွုံရငျ အရမျးအသုံးဝငျ ပါတယျ (မြားမြားရှယျထားပေးပါအုံး …)
ကိုဗဈ ကို ပေါ့ပေါ့မှတျနေ တဲ့သူတှေ ကို မွောကျဥက်ကလာ ပွညျသူ့ဆေးရုံက ဆေးရုံအုပျကွီး သတိပေးပွီ
ရွှေမုဋ္ဌော စေတီ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းနှင့် ဗလီများ ပုသိမ်တွင် ပြန်ဖွင့်